Xisbiga Wadani Oo Isu Soobax Balaadhan Ka Muujiyay Gobolada Dalka - Xogside-news
Home WARARKA DALKA Xisbiga Wadani Oo Isu Soobax balaadhan Ka Muujiyay Gobolada Dalka
Xisbiga Wadani Oo Isu Soobax balaadhan Ka Muujiyay Gobolada Dalka
Xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI oo ay maanta ahayd maalintiisi koowaad ee uu u lahaa kaltanka ololaha doorashada goleyaasha deegaanka iyo wakiillada ayaa isu soo baxyo la xidhiidha ololaha doorashada ka sameeyay guud ahaan gobollada dalka.
Gobollada xisbiga mucaaradka ee WADDANI taageerayaashiisu ay dhoola tuska ololaha doorashada isku sidkan ee wakiillada iyo deegaanka ka sameeyeen waxa ka mid ahaa gobolada Maroodi jeex ,Toghdeer, Awdal,Saaxil, Sanaag iyo Sool.
Taageerayaasha xisbiga WADDANI ayaa isku soo baxyo ay ku muujinayaan taageradooda ay u hayaan musharaxiinta xisbigaasi uga sharaxan doorashooyinka wakiillada iyo deegaanka ka dhigay gobollada dalka, iyagoo ku dhawaaqayay hal-kudhigyo ay ku taagerayaan xisbigaasi.
Waxa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI kula hadlay fagaareyaal ku kala yaala gobolada iyo degmooyinka dalka masuuliyiitiin iyo musharaxiinta u taagan doorashooyinka goleyaasha wakiillada iyo deegaanka, iyagoo ka dalbaday inay codkooda siiyaan maalinta 31-ka may.
Geesta Kale Xisbiga WADDANI ayaa ololaha doorashadda golayaasha deegaanka iyo Wakiilladda ku qabtay Magaalooyinka Hargeysa , burco , Boorama, Saylac, Balli Gubadle, Sallaxley, Oodweyne, Caynaba, Ceel Afweyne Gabiley iyo badiba magaalooyinka dalka waxaana Taageerayaasha Xisbiga WADDANI la hadlay Murashixiinta golayaasha deegaanka iyo wakiillada oo ka waramay qorshayaasha ay ku horumarinayaan magaalooyinka ay ku tartamayaan iyo sida ay wax uga bedelayaan gollaha wakiilladda.
Murashixiinta ayaa ka dalbaday dadweynaha Somaliland iyo Taageerayaashoodu inay Codkooda siiyaan 31 May oo ah Maalinta ay dhacayso doorashadda isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiillada iyagoo balanqaaday inay si daacadnimo iyo waddaninimo leh ugu adeegi doonaan dalkooda iyo dadkooda.
Previous articleGudoomiyaha Xisbiga Wadani oo shacabka ugu baaqay ninkii shalay ay doorteen ee xilkiisa ka soo bixi waayey in gacantooda ay ku badalaan
Next articlesheeko maxkamadaha: maxkamadahamaxkamadaha”